Na-achọ ịhazi. Mama mama, papa m & Baby! »Sugarlove®
Na-achọ ịhazi. Mama mama, papa m & Baby!
Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị NYC na-aga n'ihu na-agbagọ agbagọ n'ihi Sugardaters Nchọpụta Nhazi. Yabụ na ọtụtụ nyiwe mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na - eme ugbu a ka ọ bụrụ iwu maka Sugar Mamas, Sugar Daddies & Sugar Babies na Cougars & Cubs iji kwụọ ụgwọ ụfọdụ. Yabụ ha nwere ike wepu ndị ọrụ wayo, ebe ha na --eme Nchọpụta Ahụmịhe ahụrụ ọfụma!
Na-achọ nghazi ngwa na profaịlụ mkpụrụ obi & sonye na ịhụnanya
New York City na mpaghara steeti atọ bụ mpaghara kachasị maka Sugar Mamas, Sugar Daddies & Sugar Babies. Daybọchị ọ bụla tozuru etozu na ụmụ nwoke tozuru etozu na ụmụ agbọghọ na ụmụ agbọghọ na-achọ okenye na-achọ nhazi na nzukọ na ụlọ oriri na ọ datingụ onlineụ, mkpakọrịta nwoke na nwanyị n'ịntanetị, mgbasa ozi mmekọrịta na weebụsaịtị / ngwa ọdịnala. N'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye na ịmịkọta ọnụ kwa ụbọchị, ọ dị ka ọ na-esiri gị ike ịchọ onye gị na ya na-ebi ndụ & ị hụrụ n'anya?
Mkpakọrịta NYC Online mkpakọrịta nwoke na nwanyị nwere ike ịbụ usoro kachasị mma iji zute Sugar Mamas, Sugar Daddies & Sugar Babies. You bụ onye ahịa na ụfọdụ ebe nrụọrụ weebụ mkpakọrịta nwoke na nwanyị na ngwa dị, ị nwere ike hụla ọtụtụ profaịlụ. Offọdụ n'ime ha anaghị amasị ụkpụrụ gị. Ewezuga inweta ederede na ozi-e site na nke bido “Ndewo” ma kwusi ebe ahu. Ọtụtụ mkparịta ụka anaghị eduga ụbọchị. Agbanyeghị, ụfọdụ mkparịta ụka na-eduga na ụbọchị, ma ọ ga - ejedebe ụbọchị gị na - abụghị onye ha na - ekwu na ha bụ.
Ha nwere ike bụrụ okenye, tọrọ, nke dị mkpụmkpụ, karịa ma ọ bụ enweghị ọrụ. Ihe nwute kachasị, ha nwere ike ịbụ ndị ọrụ ohi nwere ndekọ omempụ yana nnukwu ihe egwu nye gị. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ, onye aghụghọ na-abụkarị akụkọ ọjọọ, ebe ọ bụ na ị na-achọ iche na ọ bụ mkpụrụ obi eziokwu. Site na mgbe ahụ ị nọ oge ezumike na ego ị gaara emefu na Organic Sugarlove®, nke ọ bụ naanị Sugarlove® na-enye. Onye Njikọ Mkpụrụ Obi!
Sugarlove® Gurus chọrọ inyere gị aka na nke gị Kingchọ nhazi. Nnukwu ikpo okwu anyị maka Sugar Mamas na-enye mkpụrụ obi, Sugar Daddies & Sugar Babies na-enye ndị ahịa ya ihe nzuzo na ntụkwasị obi. Ọ bụ na ọ bara uru ịnwale?
Sugarlove® bụ saịtị mkpakọrịta nwoke na nwanyị kachasị mma / ngwa maka Sugar Mamas, Sugar Daddies & Sugar Babies na NYC. N’enyere gị aka inweta ezigbo egwuregwu. Anyị na-ejikọ gị na usoro nke ọma. Kweere anyị, anyị ghọtara na ụmụ ntakịrị Sugar Sugar na-ekpori ndụ ndụ okomoko ma bibie ya maka ezigbo nri abalị, njem na-adọrọ adọrọ, na ụgwọ ọrụ site n'aka ndị nne na nna Sugar.
Njirimara kachasị mma na ikpo okwu anyị bụ nhọrọ "Seechọ Nhazi", n'ihi na ọ na-enye gị ohere ị nweta ọtụtụ puku NYC Sugar Mamas, Sugar Daddies & Sugar Babies. Gini mere ị ga - eji kwe ka nne na nna Sugar zitere gị nkwanye ugwu site na inye gị akụnụba, akasi obi na ịhụnanya?
Debanye aha gị na Sugarlove® & Nweta Enyemaka Site na Gurus
Mechie shuga na-ekpo ọkụ Mamas, Sugar Daddies & Sugar nke ụmụ gị. Jiri Organic Sugarlove® mee ihe. Debanye aha n'efu na saịtị ma ọ bụ Ngwa anyị, yabụ jiri laptọọpụ gị, mbadamba ma ọ bụ ekwentị gị. Kpoo Organic Sugarlove® nke Mmuo Nso!